Njikwa zuru oke - ysmụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai.
Njikwa kpamkpam nkezi 4.2 / 5 si 38
92nd, ọ nwere echiche 161.5K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, fantasy, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
Ọchịagha nke alaeze ukwu ugbu a, onye omekome a na-achọ achọ, dabara na ọnyà nke dinta ahụ kwadebere. Chere, dinta a abughi obere mmuonso nke na-esobu m? Mmụọ ozi ahụ bụ onye obi tara mmiri, onye obi tara mmiri na onye na-enweghị ụkpụrụ. Bọchị nke abụọ nke nzukọ Alfa kachasị ike na-ejegharị n’ụwa a agbanweela m ịbụ Omega nwere pheromones dị ụtọ. Qi Wang Zhi! Egbula m, m ga-agwa gị aha m!
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ manga ebe nrụọrụ weebụ